20 / 04 / 2021 20 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 1734 Views စာ0မှတ်ချက် Bucky ကျီများ, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Gamora, Instagram ကို, Lady Loki, Lego, Lego Marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ကောလာဟလများ, Loki, Marvel, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, ကောလာဟလာ, ဆမ် Wilson, Scarlet စုန်းမ, Spider-Man, စတား-သခင်ဘုရား, စတိဗ်ရော်ဂျာ, T'Challa, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Throg, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, အဖြူရောင်အမြင်
ပါဝင်သည်ဇာတ်ကောင်များ၏ပထမ ဦး ဆုံးကောလာဟလများစာရင်း Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား အွန်လိုင်းပေါ်မှာရောက်ရှိလာခဲ့တယ်၊ ဒါကတော်တော်လေးအံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့အရောအနှောတစ်ခုပါ။
We သိပြီးသား ပထမ ဦး ဆုံး Marvel minifigure စီးရီးဒီနှစ်ရဲ့အာရုံစိုက်လိမ့်မယ် Disneyတီဗီရှိုးများနှင့်အတူ နောက်ဆုံးပေါ်ကောလာဟလများ WandaVision, The Falcon နှင့် The Winter Soldier တို့အကြားကွဲလွဲမှုမရှိနိုင်ဟုဆိုလျှင်၊ နှင့် Loki ။
အနည်းဆုံး Instagram သုံးစွဲသူအဆိုအရဇာတ်ကောင်စာရင်းအပြည့်အစုံရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အနည်းငယ်ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည် bohner_ အုတ်များ - သို့ဤမျှအကြီးအကျယ်မှီလိမ့်မယ် Marvel ကျနော်တို့အကြောင်းကိုအနည်းဆုံးကြားဖူးတယ်ပြပါ။ အကယ်၍ ဒီကောလာဟလထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တမ်းဖြစ်မယ်ဆိုရင် What If …? မှဇာတ်ကောင်ငါးလုံးကိုကြည့်ပြီး Loki နှင့် The Falcon နှင့် Winter Soldier တို့မှလူနှစ်ယောက်သာရှိသည်။
ဒါကကျန်ရှိနေသေးသော slot နှစ်ခု (2021 ကိုမြင်ပြီ စုဆောင်းထားသောအသေးစား ပြန်ကနေခဲ့သည်ဆို၏ 16 မှ 12 ဇာတ်ကောင် စီးရီးတစ်ခုလျှင်) WandaVision မှသူရဲကောင်းသုံး ဦး ဖြင့်ပြည့်နှက်ရမည်။ ထို့အပြင်စီးရီး၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုမတူညီသောအရာများဖြင့်ဖြည့်ဆည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နေသည်မှာလည်း Captain America တစ်ခုတည်းအပေါ်တွင်သာမူတည်သည်။
ဤတွင်မျှော်လင့်ထားသည့်ဇာတ်ကောင်များစာရင်းအပြည့်အစုံဖြစ်သည် Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, အဆိုအရ bohner_ အုတ်များ:
ကပ္ပတိန်အမေရိက (ဆမ် Wilson)
ဗိုလ်ကြီးဗြိတိန် (Peggy ကို Carter)
စတား - သခင် T'Challa
အဘယျသို့လျှင်၏အမျိုးစုံရလိုင်း -Up နေစဉ် ... ? သင့်ရဲ့ကျန်တဲ့စာလုံးတွေကအက္ခရာတွေလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး Marvel Cinematic Universe စုဆောင်းမှု၊ ဒီစာရင်းကမှန်မှဖြစ်မယ်ဆိုရင်အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ဒီဇိုင်းများနှင့်အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မှကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့ဒီဇိုင်းများကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်။
ယခုအဘို့, ဓလေ့ထုံးတမ်းဆား၏အဖြစ်တော့နှင့်အတူယူပါ။ မင်းရဲ့ပထမစီးရီးမှာမင်းကိုတရားဝင်အတည်ပြုချက်ပေးပါလိမ့်မယ် Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား အဖြစ်မကြာမီငါတို့တတ်နိုင်သမျှ။
← microscale LEGO Disney ရဲတိုက်အကျင့်ကိုကျင့်အတွက်ကောလဟာလသတင်းများအရ
LEGO Botanical Collection 10281 Bonsai သစ်ပင်သည်အွန်လိုင်းပေါ်မှရောင်းချခဲ့သည် →